Tilmaamayaasha Ugu Caansan uguna Muhiimka ah ee loo Adeegsanayo Ganacsiga | Martech Zone
Si loo hawlgeliyo, loo cabbiro, loona hagaajiyo wixii isbeddel ah ee lagu hagaajinayo natiijooyinkaaga ecommerce, qabashada xogta la xiriirta isticmaale kasta iyo ficilkaba waa muhiim. Ma hagaajin kartid waxaadan cabbiri karin. Kaaga darane, haddii aad xaddido waxa aad cabirto, waxaad sameyn kartaa go'aanno waxyeello u leh iibkaaga internetka.
As Softcrylic, Ciyaaryahan dhexdhexaad ah oo iibiya Xogta & Falanqaynta Ciyaaraha, maaraynta tag ayaa u adeegta Digital Marketers 'oo leh aragti dheer oo ku saabsan raadraaca booqdayaasha, bartilmaameedka habdhaqanka, dib u qiimeynta, shaqsiyeynta iyo ansaxinta xogta.
Waa maxay Tag?
Tagging waa meel kasta oo leh labadaba galinta qoraallada iyo sidoo kale qabashada xogta la xidhiidha bartaada. Nidaamyada 'Analytics' waxay ku qabtaan daraasiin tags ah rakibidda aasaasiga ah. Ilaa aad adigu isku dhafanto xogta si aad ugu qabsatid meheraddaada e-commerce, in kasta oo, astaamo badan oo muhiim ah la seegay.
Infographic-kaan ka socda Softcrylic wuxuu faahfaahinayaa astaamaha ay tahay inaad ku daadiso adiga bogga ganacsiga e-commerce, bogga wax iibsiga, bogga wax soo saarka, bogga gawaarida, bogga lacag bixinta, iyo bogga xaqiijinta.
Waxay sidoo kale bixiyaan hababka ugu fiican ee ku saabsan hirgelinta calaamadeynta, oo ay ku jiraan:
Hubinta Maareynta Tag Tag Auditing waa qiimeyn waqtiyeysan, nidaamsan iyo hubinta tayada otomaatiga ah ee tags si wax ku ool ah loo aqoonsado loona hagaajiyo tags jabay, dabeecadda toogashada, soo noqnoqoshada, saxnaanta xogta iyo daadinta xogta.
Maareynta Tag Tagta Lakabka Xogta - Fulinta qaab-dhismeed si fiican loo qaabeeyey "Xogta Lakabka" waxay ka caawisaa Nidaamyada Maareynta Tag si loo helo xakamaynta ugu dambaysa, dabacsanaanta, iyo isku halaynta leh is-weydaarsiga xogta ee dhammaan meheradaha iyo toogashada sharciyada ku saleysan caadooyinka ee tags.
Isu dheellitirka Tagsyada Piggybacking - Piggybacking waa seef laba af leh. Waxay ka caawineysaa dib u habeynta wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, markii aan si fiican wax looga qaban, waxay kordhin kartaa waqtiga culeyska bogga, waxay wax u dhimaysaa amniga xogta waxayna sumcadda sumcadda hoos u dhigeysaa.
Waa tan faahfaahinta. Waxaad kala soo bixi kartaa PDF laga bilaabo Softcrylic.
Tags: tags falanqayntabogga gawaaridabogga magalkabogga xaqiijintabogga ganacsiga e-commercecalaamadaha ganacsiga e-commercecalaamadeynta ecommercecalaamadaha ecommerceinfographicbogga wax soo saarkabogga wax iibsigajilicsanxisaab hubintahubinta taghantidhawrka maaraynta tagtagistatagsmahadsanid boggatags bogga
Fadlan Ha Uga Jawaabin Codsiga Baraha Bulshada Sidan